Ruzivo rwakadzama nezve CHECKDB Kanganiso "Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Isirizvo Checksum "
musha Products DataNumen SQL Recovery CHECKDB Kanganiso: Sql Server Yakacherechedzwa A Logical Consistency-Yakavakirwa I / O Kanganiso: Isiriyo Checksum
DBCC mhedzisiro ye 'xxxx'.
CHECKDB yakawana 0 kugovera zvikanganiso uye 0 kusagadzikana zvikanganiso mudhatabhesi 'xxxx'.
SQL Server yakaona zvine mutsigo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0xea8a9a2f; chaiyo: 0x37adbff8). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 28) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x00000000038000 mufaira 'xxxx.mdf'. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
iko 'xxxx.mdf' izita reiyo yakaipa MDF faira iri kugadziriswa. Kunyangwe CHECKDB ichiti
Uku kuchiri kukanganisa kusagadzikana (Msg 824) mune dhatabhesi.
Kana huori hwakanyanya, ipapo pachave nekuenderera mberi mhosho mameseji (Msg 824), sezviri pazasi:
Msg 824, Chikamu 24, State 6, Mutsara 2 SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0x3d17dfef; chaiyo: 0xd81748ef). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 0) mune dhatabhesi ID 39 pakubvisa 0000000000000000 mufaira 'xxxx.mdf'. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Msg 824, Chikamu 24, State 6, Mutsara 4 SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0x3d17dfef; chaiyo: 0xd81748ef). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 0) mune dhatabhesi ID 39 pakubvisa 0000000000000000 mufaira 'xxxx.mdf'. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
iko 'xxxx.mdf' izita reiyo yakaipa MDF faira iri kugadziriswa.
Kana huwori hwakanyanya, iwe unogona kuona Msg 7909 inotevera Msg 824:
SQL Server yakaona zvine mutsindo kuenderana-kwakavakirwa I / O kukanganisa: isiriyo checksum (inotarisirwa: 0xcfcd2118; chaiyo: 0x6fc599d6). Izvo zvakaitika panguva yekuverengwa peji (1: 1) mune dhatabhesi ID 39 pane 0x00000000002000 mufaira 'xxxx.mdf'. Mamwe mameseji mu SQL Server yekukanganisa danda kana system yechiitiko rogi inogona kupa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo yakaipa mamiriro ekukanganisa anotyisidzira dhata rekuvimbika uye rinofanira kugadziriswa nekukasira. Pedzisa yakazara yakazara database kuenderana cheki (DBCC CHECKDB). Iko kukanganisa kunogona kukonzerwa nezvinhu zvakawanda; kuti uwane rumwe ruzivo, ona SQL Server Mabhuku Online.
Msg 7909, Chikamu 20, State 1, Mutsara 8
Iyo yekukurumidza-modhi kugadzirisa yakundikana Iwe unofanirwa kudzorera kubva backup.
uko 'xxxx' izita re database uye 'xxxx.mdf' iri dhatabhesi zita refaira faira.
chitsamba Msg 7909 chikanganiso chakakomba chinogona kuitika mumamiriro mazhinji chero nguva SQL Server funga kuti dhatabhesi harigone kupora.
Iyo data mune MDF faira yakachengetwa se8KB mapeji. Peji rega rega rine yakasarudzika checksum munda.
Kana iyo DBCC CHECKDB yekuraira yawana iyo checksum kukosha mune yemusoro peji, peji rePFS uye mamwe emapeji e data haashande uye haigone kugadzirisa dambudziko, ipapo rinomhan'ara kukanganisa uku (Msg 824). Kana iyo corrupton iri yakaoma, panogona kuve nekuenderera erros (Msg 824) kana kuteverwa neimwe kukanganisa (Msg 7909).
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokanganisa iko kukanganisa (Mumwechete Msg 824 kukanganisa):
SQL Server 2014 Kukanganisa1_3.mdf Kukanganisa1_3_fixed.mdf
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokanganisa iko kukanganisa (Kuenderera mberi Msg 824 zvikanganiso):
SQL Server 2014 Kukanganisa1_1.mdf Kukanganisa1_1_fixed.mdf
Semuenzaniso yakashata MDF mafaera ayo anokanganisa iko kukanganisa (Msg 824 kukanganisa kwakateverwa neMsg 7909 kukanganisa):
SQL Server 2014 Kukanganisa1_2.mdf Kukanganisa1_2_fixed.mdf